အကျိုးတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများကို စနစ်တကျ ဆိုင်းငံ့ ပညာပေးရမည် – Pandaily
Mar 12, 2021, 15:47ညနေ 2021/03/12 20:11:04 Olivia Halsall
တရုတ်ပညာရေးသမိုင်းမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် နေရာယူထားတဲ့ မိသားစုတစ်ခုရဲ့ လူမှုအဆင့်အတန်း အလယ်ဗဟိုမှာ နေရာယူထားတဲ့ ဒီလှိုင်းက နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အားမာန်ယူတာတွေကို ပြသနေပါတယ်။ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ပညာေရးက႑၌ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈကို ဦးတည္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ Account & nbsp ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း သိရသည္။အသုံးစရိတ်ရဲ့ ထက်ဝက်ပြည့်ထိုဌာန၏ . ဟိုလို IQ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအထိ ရွိရင္းစြဲ Edu-Tech ကုမၸဏီ ၁၄ ခုအနက္ တစ္ေထာင့္ရွစ္ခုသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ လာေသာကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကို ဖြေလျှော့ပေးဖို့အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေး၊ လူထုစည်းဝေးပွဲတွေကို စတင်လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ Asian Investment Magazine” ရဲ့ အချက်အလက်တွေအရ မတ်လမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ရန်ပုံငွေက ၂၅ သန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့လနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ၆ ဆကျော် တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဤသို့ အလုံးအရင်းဖြင့် ရန်ပုံငွေရှာဖွေသည့် ကပ်ရောဂါသည် တန်ဘိုးထက် လျှော့မတွက်ပါ။ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ လူထုအုံကြွမှု ကြီးကြီးမားမား မရှိပေမယ့် စီးပွားရေး မလှုပ်ရှားဘဲ ဦးဆောင်နေတဲ့ ၂၀၁၉ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် တရုတ္နုိင္ငံက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေနဆဲျဖစ္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ၃၈ သန္းေလာက္ ေလ်ာ့သြားတယ္။
၂၀၂၀ တြင္ EdTech ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၉ တြင္ ႏွစ္ဆနီးပါးရွိေသာ္လည္း Covid-19မွ စတင္၍ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္ပြားလာျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေစာစီးစြာ လုပ္ကိုင္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။ အကြောင်းရင်းကတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လျော့နည်းလာစေနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ စနစ်ကျမှု ပြဿနာတွေ၊ အစောပိုင်းကာလတွေမှာ စီးပွားရေးကျဆင်းမှု၊ အရင်းအနှီးရရှိမှု လျော့နည်းလာမှု၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ထိခိုက်လာမှု စတာတွေကြောင့် ထောက်ပံ့တာတွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ Focus? မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႀကီးမားလွသည့္ ကပ္ေရာဂါႀကီးမ်ားကို ရွင္သန္ရွင္သန္ရွင္သန္ႏိုင္ၾကပါေစ။
ထို႔ေၾကာင့္ “ လက္ရွိမ်က္စိ အရြယ္အစားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေငြေၾကးမလံုေလာက္မႈကို တိုက္ရိုက္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္၊ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္ေနတဲ့ကာလမွာ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးကို ခံစားေနရတာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္” လို႔ ဆိုလိုက္ရင္ေတာင္ ေငြေၾကးမလံုေလာက္မႈကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘဲ ပံုမွန္အႏၱရာယ္လို႔ ယူဆရတာေတြကို ထူးျခားပါတယ္။
သည်လိုမျိုးရင့်ကျက်တာတွေကို တရုတ်ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ဦးတီထွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာဟာ ယွမ်ငွေချမ်းသာပြီး ကျူရှင်ပလက်ဖောင်းနဲ့ ကျူရှင်ပလက်ဖောင်းတွေအတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ရာသက်ပန် ပြောပါတယ်။ သူတို့က လက်ရှိပညာရေးပုံစံကို လှုံ့ဆော်တယ်၊ ဒီပုံစံက ခိုင်မာအားကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်၊ ပညာရေးမှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာတယ်ဆိုတာက အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ သတ္တိ၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုထက် ပိုများတယ်။ ဒီသေဘာထားဟာ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ပညာေရး အရွိန္အဟုန္ကို ပိုမိုေႏွးေကြးသြားေစၿပီး ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ရႈပ္ေထြးတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Topics: မြင်ကွင်းတ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ Edtech Corporation မွ ယြမ္ေငြဘီလ်ံမ်ားစြာ ခ်မ္းသာၿပီး က်န္ခဲ့သည့္ Bongju အတြက္ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈ ထပ္မံျပဳလုပ္
ခွဲခြားတတ်သော ပညာရေးနှင့် လေ့လာသင်ယူရေးသည် လာမည့်နှစ်များတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းနှင့် အရေးပါမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ တစ်ခါတည်း အတန်းတင်စာမေးပွဲမှာ အလွတ်ကျက်မှတ်ပြီး အလွတ်ကျက်မှတ်ရတဲ့ အလုပ်တွေကို စာရွက် တစ်ချောင်းစီနဲ့ စာရွက် တစ်ချောင်းစီနဲ့ စာရွက် တစ်ချပ်စီရအောင် ရည်ရွယ်ပြီး x ကျောင်းသားတွေကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို႔ေသာ္ လတ္တေလာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အလားအလာကို အေကာင္းျမင္ ျပသခဲ့သည္။
၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လဆန်းပိုင်းတွင် တန်​းမြစ်​ဖက်​Jiangsu ျပည္နယ္ Sikhan အထက္တန္းေက်ာင္းမွ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္ nbsp; ၁၃ ကြိမ်မြောက် National Confederation Conference တွင် ပညာရေး၏ အနှစ်သာရ အမှန်ကို ပြောဆိုခဲ့သည့် ကျောင်းသားများက “စာမေးပွဲဖြေရုံသာ အောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နောင်လာမယ့် စာမေးပွဲက အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ကျနော်တို့ ပညာရေးမှာ စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်ပြီး ကျောင်းထွက်နှုန်းသာ ရှိမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်အတွက် အဓိက ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ ရမွတ္ေတြ အကုန္လုံး ပညာေရးနဲ႔မဆုိင္ဘူး။ ဒီနေ့ခေတ် ကလေးတွေရဲ့ ဘက်စုံအရည်အချင်း၊ ခွန်အားနဲ့ အနာဂတ် လူ့အဖွဲ့အစည်း တရပ်လုံးရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ကျနော်တို့ ဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ” ဟု ပြော သည်။
Donne Year က အဆိုပြုထားတဲ့ အမြင်တွေကို ပိုမိုဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်မလား၊ ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ တရုတ်အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာကို ပြောင်းလဲနိုင်မလားဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ ဒီလို လူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့ အျမင္ေအာက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူေတြအေနနဲ႔ မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးရွိတဲ့သူေတြရဲ႕ အျမင္နဲ႔ အေလ့အထေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ဖို႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးအေပၚ အျမင္ေတြ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ မျက်ခြေမပြတ် လေ့လာနေသူတွေ တစ်သက်တာသင်ယူတာ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာနဲ့ တီထွင်ဖန်တီးတာတွေကို Edu-Tech က ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နိုင်မှသာ အမှားအယွင်းရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တရုတ်မိဘတွေကတော့ ကျူရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းအပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အွန်လိုင်းသင်တန်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသိဉာဏ်တုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်စာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရည်မှန်းထားတဲ့ ဈေးကွက်ဟာ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းပညာရေးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်နေဆဲပါပဲလို့ ရွှေကြာက ပြောပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Amber Jiang ရဲ့ “Ashore ” အမည်ရှိ စာအုပ်မှာ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အတွေ့အကြုံတွေကို အသေးစိတ် ပြောပြခဲ့ပြီး သူမဟာ အောင်မြင်စွာပဲ သားဖြစ်သူနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ပီကင်းမြို့ အထက်တန်းကျောင်းမှာ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူမက ရွင္းျပပါတယ္၊ “ ကျွန်မသားက အရမ်းဖိအားများတယ်.. သူ့ကိုနောက်မှပြောတော့ ကျွန်မလည်းမျက်နှာပျက်မှာစိုးရိမ်တယ်.. သူပြောခဲ့သလိုပဲ.. ဒါဟာ စိတ်မကောင်း စရာကိစ္စတစ်ခုပါ”
Childwise ၏ CEO Jing Cesarone က မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားရာတြင္ “Global Investors ေတြ အၿမဲတမ္း ရွာေဖြေနတဲ့ Wave & ‘‘တ႐ုတ္ဟာ လူလတ္တန္းစားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနၿပီး တ႐ုတ္ကို လ်င္ျမန္စြာ ခ်ဲ႕ထြင္ေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ Dugong မိသားစုဟာ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမွာ အလြန္ကုိ ေလးစားရတဲ့ မိသားစုျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ စျေးသည်တွေ အများကြီးပေါ်လာတယ်။ တ႐ုပ္နိုင္ငံ Wind Breaking နည္းပညာကုမၸဏီမွာ အလုပ္အမ်ားဆံုးရတဲ့အတြက္ ပညာေရးကို ဆိုလိုတယ္လို႔ EdTech; နည္းပညာကုမၸဏီေတြကလည္း အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို ကန္႔သတ္မထားပါဘူး။ ဥပမာ Childwise ဆိုတဲ့ နည်းပညာကို သုံးပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးပေမယ့် တန်ဖိုးအကြီးဆုံးကတော့ သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သီးသန့်အကြောင်းအရာပါ။ နည္းပညာ copy; အေၾကာင္းအရာကေတာ့ Wang! “
Edge Tech နဲ့ Entrepreneurs ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ပညာရေးလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှု အားနည်းတဲ့ ဥပမာနှစ်ခုကတော့ Masu နဲ့ Hebei တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Masu Shupo ဟာ Hangzhou အခြေစိုက် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ ပန်းချီနဲ့ ပုံဆွဲခဲ့ပါတယ်။ River Fit သည္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္ၾကား ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ Code Platform တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ MWO Taobao CEO & Founder အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သူ Peng Hi က “၆ နှစ်ကနေ ၁၂ နှစ်ကြားကာလတွေမှာ ကလေးတွေရဲ့ တွေးခေါ်တွေးခေါ်မှုနဲ့ ခံယူချက်ကိုပျိုးထောင်၍ သင်ကြား ပေးခြင်းအားဖြင့် ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ စိတ်ကြိုက် အတွေ့အကြုံတွေကို ရရှိစေချင် ပါတယ်..” ဟု ထို့ကြောင့် နှစ်ဦးစလုံးသည် ပြင်ပတွင် မျက်စိကျကာ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် လွတ်လပ်သော တွေးခေါ်မှု ဘာသာရပ်များကို သင်ယူနိုင်ရန် ဖွင့်ဟခဲ့သည်။
အကဲြအၿပဲေတြကို ျဖည့္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ Global Education System ဟာ စာေမးပြဲနဲ႔ ေဝးကြာေနသူေတြအတြက္ က်ဴရွင္နဲ႔ ေက်ာင္းအပ္တာေတြကို တ႐ုတ္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ခုန္ပ်ံၿပီး ေနာင္လာေနာက္သားေတြအတြက္ ပညာေရးက႑သစ္တခုအျဖစ္ အမွတ္ရေနေစခဲ့ပါတယ္။ မည်သည့် ထောင်ရတု မျိုးဆက်မဆို ကြီးမားသော ဖိအား၊ စိတ်ခံစားမှု နိမ့်ပါးခြင်း၊ အစွဲအလမ်းကြီးခြင်း စသည့် စာမေးပွဲများ ဖြေသည်။
Opinion Mar 12 မတ် 12, 2021